I-China M52-yakamuva isiteji ukukhanyisa okunamandla 24 * 60W Led bee eye ezihamba ekhanyayo ukukhanya Ukwakha nefektri | Ngale
Ukukhanya kwesiteji sakamuva okungu-M52 okunamandla angama-24 * 60W Led bee eye okuhambisa ikhanda ukukhanya
ukukhanyisa kwesiteji sakamuva okunamandla 24 * 60W Led bee eye moving head light iyigumbi elinamandla kakhulu le-Led + wash + bee eye effect eliholele ikhanda elihambayo emafemini aseChina.
Singabantu imboni yokuqala eChina abaqala R & D the 40W futhi 60W kwaholela umthombo bee iso umphumela ezihambayo ikhanda. Le modeli Ifanele amakhonsathi, imibukiso ye-TV, imikhosi, imibukiso yezimoto, itiyetha, imiqhudelwano yezemidlalo njll emcimbini omkhulu.Ixhaswa yi-24 x 60W high powered Led ngama-optics akhipha ukukhanya okuphezulu kwakamuva kanye nelensi, nomphumela wamaphikseli aholelekile.
Ibuyekeze iphoyinti elilodwa lokungenisa kakhulu, lenza ukuthi indawo yayo yokukhanyisa ibe yindilinga. Uhlelo lwe-optic lunikeza i-angle yokulungisa i-angle kusuka ku-3.5 ° -45 ° ingakwazi ukumboza isigaba esisebenza kabanzi.
Ibhodi eliholelekile elijika ngakunye ngejubane elilawulwayo lidala umphumela omuhle wembali. Imiphumela enamandla yevidiyo itholakala kalula ngokwenza imephu yamaphikseli ngamanye alawulwa yideski le-DMX noma umthetho olandelwayo we-Art-Net.
ukukhanyisa kwesiteji sakamuva okunamandla 24 * 60W Led bee eye moving head light
Lokhu kukhanya ngokusobala kungukuqanjwa kobuchwepheshe, okusetshenziswe kwakamuva futhi kuthuthukiswe ngokwethu 'optic, okuphuma ngokuphelele ekukhanyeni okuletha ukugqama okuphezulu nemibala ecacile. Ngaphezu kwalokho, le optic entsha idala indawo yokukhanyisa eyindilinga, kusho ukuthi noma usesigabeni esikhokhelwayo, ingasetshenziswa ngokugculisayo.
Isiteshi sokuqala ukukhombisa le modeli umbukiso wokukhanyisa we-2021 Guangzhou Get Show, uthole izincomo eziningi ezivela kubavakashi nongoti bokusebenza basesiteji. Cishe wonke umuntu wayethathekile ngokukhanya kwayo okukhulu, imiphumela emihle, nosayizi wayo omncane (354 × 444 × 477mm) ngamandla amakhulu kangako. Kuyaphinda futhi kufakazela ukuthi, uBeyond unolwazi olunothile ekwakhiweni nasekukhiqizweni kwamalambu e-LED kuphakeme kunokwamanye amafektri.
Amaphikseli angama-24 anika u-3.5 ° kuya ku-45 ° ugongolo wengalo, i-DMX512, i-RDM ne-Art-net protocol iyatholakala, amamodeli wesiteshi ama-5 DMX angahlangabezana nokusetshenziswa okuhlukile kohlelo. I-Led ingaphezu kokuvikelwa kokushisa, uma izinga lokushisa kwekhanda liphezulu kakhulu, izinto ezikhanyayo zizokwehlisa ngokuzenzakalela ukukhanya okuholelekile.
Isebenzise ilokhi elungisiwe elisebenza ngokulula / ngokutsheka ukusiza ukusebenziseka kalula ukuphatha noma ukupakisha ilambu. Futhi izingwegwe zokugoqa zihlonyisiwe.
Umthombo oholelekile 24 * 60W 4in1 RGBW iholwa I-Pan: 540 °, ukunemba kwe-2.11 ° / isinyathelo, ukunemba kokuhleleka kahle: 0.008 °
I-engeli yokusondeza 3.5 ° - 45 ° Nyakazisa: 270 °, ukunemba 0.86 ° / isinyathelo, ukunemba kokuhleleka kahle: 0.0034 °
Ukusetshenziswa kwamandla 1500W Kusetshenziswa isistimu yokusetha kabusha enamandla kazibuthe
Imodi Yokulawula DMX512 // Umculo / RDM / ArtNet Khombisa: Isibonisi sombala we-1.8-inch TFT color, 180 ° eguqulwayo
Isokhethi ledatha ngaphakathi / ngaphandle: amasokhethi ama-3-pin & 5-pin XLR
Imodi ye-DMX 21/25/33/129/106 CH (I-ArtNet) Isokhethi Yamandla: I-Power Con in / out
Isilinganiso Sokuvikelwa: IP20
Ukugeza okungafaniyo + Umqondo omkhulu wesigxobo + Umphumela wamehlo wezinyosi okhazimulayo Imodi Yokulawula DMX512 // Umculo / RDM / ArtNet
Ukulawulwa kwamaphikseli anikwe amandla Nika amandla ukulawula ukusetha kabusha kusuka kumenyu noma kukhonsoli Imodi ye-DMX 21/25/33/129/106 CH (I-ArtNet)
I-0-100% Linear dimmer, flicker free Ukucaciswa
Ngaphezulu kwamanje, ngaphezu kwamandla, phezu kokuvikelwa kokushisa
Isivinini somsebenzi we-fan autoly adjustable ngokuya ngamazinga okushisa ekhanda Ubukhulu: 354mm × 444mm × 477mm; NW: 25 GKS
Imininingwane yomsebenzi olula ingafundwa kwimenyu Iphakethe elijwayelekile: ibhokisi; Ikesi lendiza ngokuzithandela
Hlela kabusha izinhlobo ezingama-44 zomsebenzi omkhulu wemibala Isitifiketi
esethiwe izinhlobo eziyi-121 zomphumela wokusebenza kwe-macro I-CE, i-RoHS
Ikesi Lokusebenza Komkhiqizo
Langaphambilini Ugongolo lwe-F800-9 * 60w kanye ne-bar yokuhambisa ukukhanyisa ngokulawula kwe-pixel
Olandelayo: Amandla we-F720-High ahambisa ukugeza ukusondeza ngaphandle nge-18x40W led